Xaragada Brass, Brass Knob, Pull Handle - Zhangshiwujin
Golaha wasiirada / alaabta guriga / albaabka albaabka
Gacanta Golaha / Golaha
Lever Door Gacanta
Qoraalka jilicsan ee jilicsan ee T Bar Barbardhiga Koob Qolka jiifka P ...
Dulmarka Tafaasiisha Degdega ah Nooca: Gacanta Qalabka & Knob, Gacanta Qalabka & Knob, Gacanta qallafsan fudud ee xirmada Boostada: Y Goobta Asalka ah: Zhejiang, Shiinaha Magaca Summada: KOPPALIVE Model Number: 6130-T Qalabka: Adeegsiga Brass: ...
KOPPALIVE Promotion Luxury Design Design Casri Casri ah ...
Dulmarka Tafaasiisha Degdega ah Nooca: Gacanta Qalabka & Knob, Gacanta Qalabka & Knob, Gacanta qallafsan fudud ee xirmada Boostada: Y Goobta Asal ahaan: Zhejiang, Shiinaha Magaca Summada: KOPPALIVE Model Number: 6091 Maqaarka: Adeegsiga Brass: ...
Qalabka korantada korantada oo dhan duug culus ...
Qalabka qalabka jiifka ee dharka badan leh
Naqshadeynta casriga ah ee caanka ah ee naxaasta leh ee xoogga weyn ...
Ruian Zhangshi Hardware Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2013, oo ku yaal Wenzhou, gobolka zhejiang, oo u dhow Ningbo & Shanghai Port. Waxaan ku takhasusay soo saarista noocyo kala duwan oo khiyaano guri ah, alaab guri, alaabaha jikada ee jikada muddo tobanaan sano ah, oo ay ku jiraan xargaha, mashiinka albaabka, xamuulka naxaasiga ah in kabadan 1 milyan oo kumbuyuutar oo wax soo saarka sanadlaha ah. Waxaan haysannaa tiro ka mid ah shaqaalaha Farsamada iyo maamulaha, iyo in ka badan 5 qof oo nashqadeysan. Marka waxaan leenahay naqshad gaar ah oo badeecad ah, waxaan sameyneynaa qaabab cusub oo qurux badan oo qurux badan si aan ula kulanno dareenka gacanta ee raaxada leh ee adeegsadaha. Waxaan ku guuleysanaa qadarinta macaamiisha gudaha iyo dibadaba.
Waxaan qaadnaa qalabka saxda ah ee caqliga leh ee casriga ah, khadka waxsoosaarka otomaatiga ah, waxaan raadineynaa heerka tayada waxsoosaarka iyo hanaanka sahaminta, waxaan sii wadaynaa hagaajinta habka xakamaynta wax soo saarka, hanaanka wax soosaarka oo aan buuxino shuruudaha farsamada ee macaamiisha caalamka. Waxaan ka fa'iideysannahay horumarinta caaryada, mishiinada CNC, hanaanka been abuurista, iyadoo qiimaheennu uu ka hooseeyo 3% - 5% marka loo eego tartamada kale.
Waxaan ilaalinaa wada-xiriir tayo-sare leh macmiilka, si joogto ah waxaan u qaadnaa baahiyaha macaamiisha iyo talo si aan u wanaajino heerka adeegga iyo tayada, gaarno amarrada tayada iyo tirada wanaagsan. Waxaan helnay shahaadada qiimeynta wax soosaarka BV, waxaan ballaarin doonaa suuqa kormeerka iyo iskaashi caalami ah oo dheeri ah sannadaha soo socda. Ujeedada shirkaddeena ayaa ah "midnimada koowaad, tayada koowaad, tayada koowaad, macaamiisha marka hore, iskaashiga guuleysiga", si aan u sii wadno horumar isdaba joog ah. Ballan qaadkeena macmiilkayagu waa adeeg wanaagsan, qiimo tartan ah, oo ku dhammaystiro amarka tayo sare leh.
Fakis: 0086- (0) 577-65962238
Albaabka Brass Door Knobs, Albaabka Jaranjarada ee Ciriiriga leh, Doon adag oo albaabka adag leh, Doomaha Mashiinka Dabka ee Brass Lever, Gacmaha Qalabka Qalabka, Gacmaha Qalabka Iyo Qalabka,